နွေဆူးလင်္ကာ: သူငယ်ချင်း ၀တ္တုတိုလေးများ
ဘာလက်ဆောင်များပါလိမ့် ... ???
ဆေးရောင်စုံ နဲ့ချယ်မှုန်းထားတဲ့အလိုက်သိမှု ၊ယုံကြည်မှု ၊ပျော်ရွှင်မှု ပန်းချီကား လေး တချပ် ဖြစ်နေမလားးးးးး
အိ ဖတ်ပီး ဘာမန့်ရမလဲ မသိဘူး ဂမှာ များက ပိန်းပါတယ် ဆိုမှ ဟွန်းးးးး
နင့်ရဲ့ ဆေးစက်တွေကိုတောင် ငါဝေမျှယူချင်ပါတယ် ဆိုတော့...မွေးနေ့ လက်ဆောင်က သူ့ ရဲ့ ဆေးစက်တွေ ပေါ့။ ဟုတ်မလားတော့မသိဘူး။း) ၀တ္ထုတိုလေးကတော့
ဖတ်လို့ ကောင်းတယ်။ တွေးခိုင်းတာလေးလည်းပါတယ်။
နံပါတ် ၁ နဲ့ ၃ ကတော့ တကယ်ဟတ်ထိသွားတယ်။ ကျန်တာတော့ သိပ်နားမလည်ဘူးခင်ဗျ။ ကျနော့်ကိုယ်ပိုင် အမြင်အရ နံပါတစ်ဟာ ခံစားမှုကို နူးညံ့လှပစွာ ဖော်ကျူးသွားတယ်။ ကျနော်ကြိုက်တယ်ဗျာ။
ဟုတ်ဘူး မွေးနေ့လက်ဆောင်လေးက ဒီဝတ္ထုတိုလေးများဆိုတဲ့ပိုစ့် လေ .. ဟုတ်တယ်မလားနွေဆူး နင်ပေးတဲ့လက်ဆောင်က.. ဒီဟာလေးမလား
စာကိုတော့ ဖတ်ပြီးသွားပီ ကိုယ့်ခံစားချက်နဲ့ ကိုယ် ဘာသာပြန်ကာ မှတ်ယူသွားလိုက်တယ် ... နံပါတ် ၅ ရဲ့  အဖြေကတော့ .. ( ) အဟိ.... ပါပဲ...
မွေးနေ့လက်ဆောင် ယူပြီး ပြန်သွားတယ်၊ ဘာလဲ အိမ်ရောက်မှ ကြည့်တော့မယ်၊ ခုတော့ သိဘူးး
အီးးးး ဟီးးး ဟီးးးးးးးးး
ဘယ်သူမဆို တွေးမိမှာပဲ ဟွန်းးးးးးးးးးးး
မွေးနေ့ လက်ဆောင် ယူပြီးပြန်သွားပြီ။
ကြည့်ရဲဘူး။ အိမ်ရောက်မှ ကြည့်မယ်။။။ ဟိဟိ
စိတ်ကူးဆန်းလေးနဲ့ ၀တ္ထုတိုလေး ကောင်းတယ်။ အဟဲ
လူကို အ' တယ်များထင်နေလား....။းp
Friendship and Love ပေါ့ကွယ်..
ဘာလက်ဆောင်လည်းမသိဘူး နော် သိချင်လိုက်တာ :)
ဟော်ဗျာ ... အဲလိုကြီးတွေးကြတာလား။ ballonlay ပြောတာ မှန်တယ်လေ။ မွေးနေ့လက်ဆောင်ကို သင်တို့လည်း ဖတ်ပြီးပြီ ဆိုမှတော့ ဒီဝတ္တုတိုလေးကိုက မွေးနေ့လက်ဆောင်ပေါ့။ ကျွန်တော် စာမရေးတတ်သေးဘူးထင်တယ်နော်။ အားလုံးစဉ်းစားပေးကြတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ရိုးရိုးလေးပါပဲ။ မွေးနေ့လက်ဆောင်က ဒီပို့စ်လေးပါပဲ။
ကောင်လေးက ကောင်မလေးကို ပေးတဲ့ မွေးနေ့ လက်ဆောင်...
မွေးနေ့လက်ဆောင်က ဟိုဟာပဲ ဖြစ်ရမယ်။
ဟိုဟာ = ?
ကိုနွေဆူးလင်္ကာရဲ့ နှင်းဆီပန်း နီနီလေးကို ပြောတာပါခင်ဗျာ။
မွေးနေ့လက်ဆောင်က မျက်စိအောက်က အပျောက် မခံတာ
နားလည်မှုတွေ . . . . စတာတွေပေါ့နော်
ဟေးးးး တို့အထင်နဲ့စာရေးသူတင်ပြချက်ကွက်တိပဲကွ။ မွေးနေ့လက်ဆောင်=ပို့စ်။။ဝေးပျော်တယ်ကွ (ဒုန်းဒုန်းဒုန်း..ပျော်လို့ခုန်သွားတဲ့မြည်သံစွဲအလင်္ကာ)
ကျနော် ကူးပြီး အီးမေးလ်ကနေ ရှဲချင်လို့ ယူသွားလိုက်တယ်နော်။ ရတယ်ဟုတ်။ နောက်မှ ကူးခ လက်ဖက်ရည်တိုက်မယ်။ အကြွေးမှတ်ထား။ အဟဲ။ =)
မွေးနေ့လက်ဆောင်ဘာလဲ မသိဘူး ပိန်းတယ်ဒီက
မွေးနေ့လက်ဆောင်က ဘာလဲဟင်။ ဒီက ခပ်တုံးတုံးနဲ့ သိဘူးနော့်။
ဟား ဟား ဟား တိထွားဘီကွ......
အဖြေက ဘာများလဲဗျာ ကြင်နာခြင်းလား နားလည် ခြင်းလား အချစ်လား ..... တစ်ခု ခု ဖြစ်မှာပေါ့နော် ....... ဘာလဲတော့ မသိဘူး ...... :D
ကိုဆူးရဲ့သူငယ်ချင်းအတွက်မွေးနေ့အမှတ်တရ ရေးတယ်လို့ထင်မိတယ်...။လက်ဆောင်လေးက ကောင်းတယ်ဗျ ကျွန်တော်တို့လည်း ခံစားခွင့်ရလို့
အကြိုက်ဆုံးကတော့ လောကကိုမြင်တဲ့ ရှုထောင့်လေးပါပဲ...။လေးစားသွားရတယ်...။
သိပ္ပံနည်းကျအတွေးအခေါ်တွေကိုစီပြီး ပေးလိုက်တဲ့လက်ဆောငိကိုတော့ ဒီအတိုင်းလေးသယ်သွားတယ်။အိမ်ရောက်ရင် ပြန်နွေးမလို့ ၊ဘာသာဘာဝအတွေးအခေါ်တွေက မနဲပါလားဗျာ။
အဲဒီလက်ဆောက်ဟာ ဘာလက်ဆောင်ဆိုတာ မသိပေမယ့် အစ်ကို ပေးလိုက်တဲ့ လက်ဆောင်လေးကတော့ ပီတိတွေကို ဖြစ်စေပါတယ်။